Hiran State - News: HS:-Mudanayaasha baarlamaanka oo eedeyn kulul u jeediyey
HS:-Mudanayaasha baarlamaanka oo eedeyn kulul u jeediyey
HS:-Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dowladda KMG Shariif Shiikh Axmed uu awoodii iyo taladii dalka intaba uu gacanta u galiyay madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Shiikh Max’ed Faroole.
Xildhibaanada waxaa ay sheegeen in wax lala yaabo ay tahay in madaxweynaha Puntland uu ka hadllo arrimaha Dastuurka dalka iyo waliba dhismaha maamul gobolleedyada amaba in maamulka Puntland ay soo daabacanayaan lacag cusub, iyaga oo intaa ku daray in awoodaas uu ku hadllayo madaxweyne Faroole sida ay hadalka u dhigeen uu siiyay madaxweyne Shariif waxiika danbeeyey shirkii Garoowe.
‘’In maata uu yiraahdo Faroole, dowladdu awood uma laha in ay aqoonsato maamul gobolleed, waxaan dhihi karaa waxaa gaarsiiyay madaxweyne Shariif oo talada dalka ku wareegayay iyo Puntland C/raxmaan Faroole, ‘’ sidaa waxaa yiri xildhibaan Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudayaasha la yaaban sidey u socoto siyaasada dalka.
Xildhibaanadu waxaa ay intaa ku dareen in marnaba uusan xaq u laheyn madaxweynaha Puntland in uu ka hadllo arrimaha Dastuurka iyo waliba dhismaha maamul goboleedyada oo dhamaantood ah howl u taala dowladda dhexe ahna howlaha ugu miisan ee la doonayo in la soo marsiiyo baarlamanka.
Hadalka xildhibaanada ayaa imanaya kadib markii uu madaxweynaha maamulka Puntland uu si cad munaasabad ugu sheegay in dowladda dhexe awood buuxda u laheyn in ay aqoonsato maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa la sameyn doono iyadoo aan lala socodsiin Puntland.
Marka xaalada Soomaaliya Soomaaliya dhinackasta laga eego dowlada hada jirto waa mid u muuqata fashil marka la eego sida ay siyaasada dalka iskugu xaglinayaan masuuliyiintii iyadoo ay magaalada Mogdisho joogaan baarlamanka Soomaaliya shir aysan raali ka aheyn amaba aan lagala tashan mudayaasha.
· admin on March 11 2012 13:51:42 · 0 Comments · 1686 Reads ·
14,667,451 unique visits